आज मात्रै थप ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, कहाँ कति ? विस्तृत विवरणसहित — Sanchar Kendra
१पोखरामा थप २ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
२बेनी जिप दुर्घटना- एक जनाको मृत्यु, १० घाइते
३आईपीएलमा आज पञ्जाव र राजस्थान भिड्दै
४कोरोना सङ्क्रमणबाट थप ३ जनाकाे मृत्यु
५कांग्रेस सभापति देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक
६इस्लाम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मदको जन्मोत्सव मनाइँदै, प्रदेश २ मा सार्वजनिक विदा
७विश्वभर ४ करोड ५३ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
८आज कोजाग्रत पूर्णिमा, दसैंको बिदाइ र तिहारको स्वागत गरिँदै
९अनेरास्ववियू संयोजक ऎन महर बझाङबाट लखेटिए
१०गृहजिल्ला बझाङमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट लखेटिए अनेरास्ववियू संयोजक ऎन महर , भागेर कहाँ पुगे ?
११र्यापर भिटेनलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा प्रहरी
१२फेरी बढ्यो नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, आज एकैदिन यति धेरैको मृत्यु
५प्रत्येक १० जनामध्ये एक जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको हुन सक्छ- डब्ल्युएचओ
७ओली सरकारलाई अर्को झट्का, सर्वोच्चको दियो फेरि यस्तो कडा आदेश
९डब्ल्यूएचओको अर्को नयाँ डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रा’स, गरियो यस्तो अपिल
१०कोरोना प्रकोपबारे नबिल बैंकले बनाएको सन्देशमुलक भिडियो भाइरल, हेर्नुहोस भिडियोसहित
१२ओली सरकारलाई अर्को झट्का, सर्वोच्चले दियो यस्तो कडा आदेश
आज मात्रै थप ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, कहाँ कति ? विस्तृत विवरणसहित
काठमाडौं । नेपालमा शुक्रबार थप ५ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ७० पुगेको छ ।
पर्साका ४५ वर्षीय पुरुषको पाटन अस्पतालमा निधन भएको छ । यसैगरी पर्साकै ८९ वर्षीय पुरुष, पर्सा-११ का ५७ वर्षीय पुरुषको गण्डक अस्पतालमा निधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी शुक्रबार नै सिरहा गोलबजारका २५ वर्षीय पुरुष र सर्लाहीका ४५ वर्षीय पुरुषको पाटन अस्पतालमा निधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार मोरङको कोशी अस्पताल, विराटनगरमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरका ४५ वर्षीय पुरुष र रंगेली नगरपालिकाका ४५ वर्षीय पुरुषको कोरोनाले मृत्यु भएको हो । उनीहरूको बुधबार नै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपचारका क्रममा विराटनगरमा मृत्यु भएका ४५ वर्षीय पुरुष मंगलबार कोशी अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनीमा मधुमेह र लिभरको समस्या थियो ।
यसैगरी बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचाररत सर्लाही–६ मलंगवाकी ६५ वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा बुधबार मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मनमोहन अस्पतालबाट बलम्बु रिफर गरिएकी उनलाई गत साउन १९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनीमा निमोनियाका साथै स्क्रब टाइफसको लक्षण समेत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धनुषाकी वर्ष ७२ वर्षीकी एक महिलाको ओम अस्पतालमा निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी विहीबार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अर्का एक जना सप्तरीका ४५ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ ।
रुपनी गाउँपालिका-५ गढियाका ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्युपछि गरिएको स्वाब परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका उनलाई ज्वरो आउनुका साथै श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि धरान लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।
यसअघि बुधबार पर्साकी १८ वर्षीया महिलाको कोरोनाले निधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी पर्सा विरगन्जकै वर्ष ४६ का एक पुरुषको पनि बुधबार नै कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । योसँगै निधन हुनेको संख्या ६० पुगेको थियो । यसअघि मोरङ विराटनगर-५ आदर्शटोल बस्ने वर्षा ७७ का एक जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
यसअघि पर्सा ६८ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको थियो । नारायणी बयोधा अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएसँगै नारायणी कोभिड अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको निधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । त्यसैगरी पर्साको वीरगन्जका थप तीन जना र ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत एक महिलाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
पाटन अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत ६५ वर्षीया उनको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । उनी गत साउन ६ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । मृतक महिला ललितपुर थसिखेलकी बासिन्दा रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
यसैगरी वीरगन्जमा एकै दिन थप तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। वीरगन्ज महानगरपालिका- ११ श्रीपुरका ५६ वर्षीय पुरुष, वीरगन्ज महानगरपालिका-१६ नगवाका ३५ वर्षीय युवक, वडा नम्बर-२ छपकैयाका ६५ वर्षीय वृद्ध गरी तीन जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि हो ।
वीरगन्ज–२ छपकैयामा ६५ वर्षीय वृद्ध आफ्नै घरमा मृत फेला परेका थिए । उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य दुई जनाको भने उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको हो । योसंगै वीरगन्जमा मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सख्या १३ पुगेको छ ।
यसैगरी पर्सा वीरगञ्ज -११ की ८५ वर्षीय महिलाको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । उनको नारायण अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । त्यसैगरी नारायणी कोरोना विषेश अस्पतालमा उपचारत बाराकी १७ वर्षीया किशोरीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
त्यसैगरी मोरङका ४५ वर्षका पुरुषको कोरोनाले मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उनी कोशी अस्पतालबाट रेफर गरिएका बिरामी थिए । प्रतिष्ठानमा आइपुग्दा ती बिरामी वेहोस् अवस्थामा थिए । प्रतिष्ठानले उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार शुरु गरेको थियो । तर उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
यसअघि बझाङ बुंगलका एक ६५ वर्षीय पुरुषको कोरोनाले मृत्यु भएको थियो । वीरगञ्जको नारायणी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारका क्रममा ६५ वर्षीय भारतीय नागरिकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यसैगरी धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–८ डुमरीयाका ३६ वर्षका पुरुषको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो ।
त्यस्तै बाराको फेटा गाउँपालिका- ३ का एक ६० वर्षीय पुरुषको त्रिवि क्षियण अस्पताल महाराजगंञ्जमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आज थप ५ जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टिसँगै हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या ७० पुगेको छ ।
आईपीएलमा आज पञ्जाव र राजस्थान भिड्दै
कांग्रेस सभापति देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक
गृहजिल्ला बझाङमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट लखेटिए अनेरास्ववियू संयोजक ऎन महर , भागेर कहाँ पुगे ?
फेरी बढ्यो नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, आज एकैदिन यति धेरैको मृत्यु
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित
एकाबिहानै थप ३ कोरोना संक्रमितको मृत्यु